Akriderm Gent - incazelo ukulungiselela
Eczema, dermatitis kanye nezinye izifo zesikhumba polyetiology imvelo kunalokho kunzima ukuyelapha. Akriderm eseGhent, ukubuyekezwa okuyinto esihle kakhulu, ngempumelelo ukulwa nalezi zifo. Kuwufanele akusiyo ebiza kakhulu, kodwa ngempumelelo kakhulu. Akriderm Gent ekhishwe ngendlela ukhilimu. Umbala: omhlophe noma awube mhlophe. Zenzelwe ukusetshenziswa ongaphandle. Omunye igremu ekulungisweni iqukethe: betamethasone dipropionate futhi betamethasone 640 micrograms ka gentamicin sulfate futhi 1 mg gentamicin. Ngaphezu kwalokho, propylene glycol, uwoyela Vaseline, ethylenediaminetetraacetic acid, i-potassium dihydrogen phosphate, utshwala cetostearyl, amanzi ahlanzekile.
Umuthi Akriderm yaseGhent kungokwalabo iqembu pharmacotherapeutic ka aminoglycoside antibiotic- + glucocorticosteroid.
Umuthi ine anti-iguliswa, anti-amagciwane anti-inflammatory umphumela. Betamethasone dipropionate ethathela komzimba, ukuvuvukala ukulunywa. It has impahla okusithiyayo of leukocyte. Lizomalnye okhulula enzyme mediators ukuvuvukala e yisishiso kuvimbela phagocytosis, akwenzeki ngokuphazima edema ukuvuvukala incipha semithambo permeability nezicubu. Gentamicin (aminoglycoside-antibiotic). It kunomphumela amagciwane phezu Amagciwane of tesikhumba virus. Ikakhulukazi asebenzayo ngokumelene amagciwane Gram-negative futhi Gram-HIV. Akukona isinyathelo anaerobes, isikhunta namagciwane. Isetshenziselwa dermatitis, eczema, atopic dermatitis, elula ezingamahlalakhona herpes, solar dermatitis, dermatitis exfoliative, emisebeni dermatitis, inabukeni amawala, psoriasis, ukulunywa.
Cream Akriderm yaseGhent isetshenziswa endaweni elikhanyayo kwesikhumba, bezihlikihla, izikhathi 2 ngosuku. Esikhathini sibi lesi sifo izidakamizwa lingasetshenziswa singly, ezimweni ezinzima kube inombolo enkulu ukusetshenziswa. Isikhathi kwelashwa amasonto 1-4.
esivuthayo Kubhekiwe, isikhumba ukucasuka, ukoma, folliculitis, amawala, hypopigmentation, hypertrichosis. Ngekusetjentiswa isikhathi eside, ikakhulukazi uma zisetshenziswa kusaladi occlusive - yesibili ukutheleleka potnichka, purpura, isikhumba yoma.
Ukusebenzisa izidakamizwa is contraindicated Akriderm yaseGhent isikhumba isifo sofuba, isikhumba kuwukubonakaliswa ugcunsula, varicella, herpes simplex, post-lokugoma isikhumba ukusabela, izilonda ezivulekile, lactation, hypersensitivity kuya izingxenye izidakamizwa, kanye izingane ezingaphansi konyaka 1.
Uma ngaphakathi 2 amaviki ize, kubalulekile ukuba xhumana nodokotela uphethwe olwengeziwe. Njengoba kwanda ukucasuka noma ukuzwela lenyuka livela, ukwelashwa kufanele ayeke kanye nodokotela. Awukwazi ukusebenzisa izidakamizwa isikhathi eside Akriderm yaseGhent ebusweni. Ngemva ukusetshenziswa isikhathi eside ebusweni babonakala izinguquko atrophic. Gwema kokuthola ukhilimu emehlweni noma isikhumba ezilimele futhi izilonda ezivulekile. Ukwelashwa nezingane kweminyaka engu-12 ubudala kudingeka ukuba afeze ngaphansi kokuqondisa udokotela, ngoba izingane bazwelane kakhudlwana glucocorticoids lwendawo. Ngo zinkulu izingozi ingane ngesikhathi sokukhulelwa isicelo kuvunyelwe kuphela esimweni lapho inzuzo ukwelashwa unina. Isetshenziswa ngemithamo emincane futhi isikhathi esifushane. Ngesikhathi sokwelashwa kufanele ayeke ibele. Endabeni isicelo eside zomuthi zizokhishwa kancane kancane kwenziwe.
Akubonakali kanjalo, kodwa ukusetshenziswa eside kungabangela ukweqisa izidakamizwa ezingamahlalakhona. Izimpawu Hyperglycemia, glucosuria, ukubonakaliswa Cushing Syndrome. Usuku lokuphelelwa yisikhathi ku iphakethe. Iyatholakala ngaphandle kadokotela.
"Phytolysinum" cystitis: ukubuyekezwa kodokotela kanye neziguli
Izinkomba Zokusetshenziswa "Prestarium". Incazelo izidakamizwa, imiphumela emibi, analogs
"Tribulustan" lisho ukuthini. Izibuyekezo
Indlela "Fortrans 'belungiselela colonoscopy
Izidakamizwa "Gammalon": imfundo, impahla Izibuyekezo
"Advokard" Tablets: ukufundiswa isicelo, libuyekeza Ukwakheka kanye nencazelo
Eduzane umzimba noma ibhizinisi embhedeni
Ultrasound we gallbladder
IsiZulu Ulimi: isithombe phrojekthi. Mbumbulu, amakhaya ingaphakathi British. Yakha English House
Lake Eyre e-Australia
Umfuyi we-Bagger-288: izinkomba nezithombe
Universal yokuqasha Inkampani "VTB yokuqasha": abasebenzi ukubuyekezwa, imininingwane
Torvalds Linus: Biography, izithombe kanye akufezile
Amasonto 20 ultrasound: evamile, isithombe
Indle Domestic. Izici obandayo
Puzzle ethakazelisayo insipho
Glass wezindlu, ezinhlobo zazo isicelo